Nezvedu | Cangzhou Hengyue auto zvikamu Co, Ltd.
Cangzhou Hengyue auto zvikamu Co, Ltd. iri muHejian, Hebei, padyo neguta guru reBeijing neTianjin port, zvifambiso zviri nyore kwazvo.
Kambani yedu muunganidzwa wekuzvimirira kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa seimwe yekirabhu yehunyanzvi yekugadzira kambani, ine makore mazhinji e clutch gungano rekugadzira ruzivo. Iyo yegore kugadzirwa kwe clutch disc inopfuura 100,000 seti. Iyo kambani ine dzakasiyana siyana hombe uye nepakati-saizi-simbi yekugadzira michina, yekupisa yekurapa yekugadzirisa michina, pamwe neakasiyana epamberi fekitori michina uye yekuyedza michina. Iyo mhando yechigadzirwa ndeyechokwadi, uye ine kusakara-kuramba, yakanyanya tembiricha kuramba uye hupenyu hwakareba, nezvimwe.
Isu tinogara tichiedza napose patinogona napo kusangana nezvinodiwa nevatengi. Sezvo kusingakanganiki kukura kwehupfumi hwepasi rose, kambani yedu inoda nemoyo wese kushandira pamwe nemabhizinesi epasirese kuti vabudirire kukunda.